Inona ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabyle Kachin Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Sãotomense Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Ny atao hoe Filan-kevi-pitantanana, dia lehilahy kristianina matotra vitsivitsy, izay manome tari-dalana ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Mizara roa ny asan’izy ireo:
Izy ireo no manara-maso hoe inona ny toro lalan’ny Baiboly avoaka amin’ny boky sy gazety, na ianarana any am-pivoriana sy any amin’ireo sekolin’ny Vavolombelon’i Jehovah.—Lioka 12:42.
Izy ireo no miandraikitra ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany, ka mitarika ny asa fitoriana ataonay. Mitantana ny vola sy fanomezana rehetra omen’ny olona koa izy ireo.
Manahaka ny “apostoly sy ny anti-panahy tany Jerosalema” tamin’ny taonjato voalohany ny Filan-kevi-pitantanana. Nandray fanapahan-kevitra lehibe ireo lehilahy ireo fahiny mba hahasoa ny fiangonana manontolo. (Asan’ny Apostoly 15:2) Tsy izy ireo no nitarika ny fiangonana tamin’izany. Tsy ny Filan-kevi-pitantanana koa no mpitarika ny fandaminana misy anay. Eken’izy ireo kosa fa i Jesosy Kristy no notendren’i Jehovah Andriamanitra ho Lohan’ny fiangonana, ary mitady tari-dalana ao amin’ny Baiboly izy ireo rehefa hanapa-kevitra.—1 Korintianina 11:3; Efesianina 5:23.
Iza avy no anisan’ny Filan-kevi-pitantanana?
Ireto avy no anisan’ny Filan-kevi-pitantanana nanomboka tamin’ny Janoary 2018: Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson, ary David Splane. Manompo any amin’ny foibenay any Warwick, any Etazonia, izy ireo.
Ahoana no fomba fiasan’ny Filan-kevi-pitantanana?
Nanangana komity enina ny Filan-kevi-pitantanana mba hanara-maso ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ka manompo ao amin’ny iray na maromaro amin’ireo komity ireo izy tsirairay.
Komitin’ny Mpandrindra: Io komity io no miandraikitra ny resaka lalàna rehetra. Manao zavatra izy rehefa misy loza, na rehefa enjehina noho ny finoanay izahay Vavolombelon’i Jehovah, na rehefa misy olana hafa mila alamina haingana mahazo anay.
Komitin’ny Mpiasa: Io komity io no mikarakara an’izay ilain’ny fianakavian’ny Betela eran-tany.
Komitin’ny Fampanontana: Izy io no miandraikitra ny fanaovana pirinty ny boky sy gazety sy ny fandefasana azy ireny. Io komity io koa no manara-maso ny fanorenana toeram-pivoriana sy biraon’ny fandikan-teny ary tranon’ny sampana.
Komitin’ny Fanompoana: Io komity io no miandraikitra ny fitoriana ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana.”—Matio 24:14.
Komitin’ny Fampianarana: Izy io no manomana ny sakafo ara-panahy omena any am-pivoriana, amin’ny sekoly isan-karazany, ary amin’ny video sy fandaharana noraisim-peo hafa.
Komitin’ny Fanoratana: Izy io no mandinika hoe inona ny toromarika ara-baiboly atao ao amin’ny boky sy gazety sy ao amin’ny tranonkalanay. Miandraikitra ny asa fandikan-teny koa izy.
Ankoatra ny zavatra ataon’ny Filan-kevi-pitantanana ao amin’ireo komity ireo, dia mivory isan-kerinandro koa izy mba handinika ny zavatra ilain’ny fandaminanay. Mikaroka an’izay lazain’ny Soratra Masina izy ireo, amin’ireny fivoriana ireny. Manaiky hotarihin’ny fanahy masin’Andriamanitra izy ireo rehefa hanapa-kevitra, ary miara-manaiky an’izany avy eo.—Asan’ny Apostoly 15:25.
Iza no mpanampy ny Filan-kevi-pitantanana?
Kristianina azo itokisana izy ireo ary manampy an’ireo komity eo anivon’ny Filan-kevi-pitantanana. (1 Korintianina 4:2) Efa mahay tsara ny asa ataony ao amin’ilay komity misy azy izy ireo sady manana traikefa amin’izany. Manatrika ny fivoriana isan-kerinandro fanaon’ilay komity misy azy koa izy ireo. Tsy manapa-kevitra izy ireo, nefa manome soso-kevitra sy fanazavana mety hilaina. Manatanteraka ny fanapahan-kevitr’ilay komity izy ireo avy eo, ary mijery hoe nanao ahoana ny vokatr’ilay izy. Mety hasain’ny Filan-kevi-pitantanana hitsidika any amin’ny toerana maro eran-tany izy ireo, na mety hotendreny hanao anjara amin’ny fivoriana fanao isan-taona na amin’ny Fizarana Diplaoman’i Gileada.
IREO MPANAMPY NY FILAN-KEVI-PITANTANANA
Lazain’ny Baiboly ny antony andaminana ny tena Kristianina sy ny fomba andaminana azy ireo.
Ny apostoly sy ny anti-panahy tany Jerosalema no filan-kevi-pitantanana tamin’ny taonjato voalohany. Ary amin’izao andro izao?
Hizara Hizara Inona no Atao hoe Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah?
Nahantra Nefa Lasa Nanan-karena